Balaa Konkolaataa Godina Booranaa Ganda Dhaarriitootti muudateen lubbuun nama hedduu darbe. - NuuralHudaa
Balaa Konkolaataa Godina Booranaa Ganda Dhaarriitootti muudateen lubbuun nama hedduu darbe.
On Oct 9, 2018 22
Godina Booranaa Aanaa Yaaballoo Ganda Dharriitoo jedhamutti konkolaataan boba’aa fi uummata walitti fe’ee Bulee Horaa irraa Mooyyaleetti imalaa ture, harree irra bu’uun kufee lubbuun imaltoota hedduu darbuu gabaafame.
Beenzinni konkolaataan fe’atee ture boba’uun namni Konkolaataa keessa jiru hedduun kan guubate tahuu maddeen gabaasan. Reeffi namoota Konkolaataa keessa turanii eenyummaa isaanii adda baafatuu kan hin danda’amin tahuus beekameera.
Balaa KonkolaataaGodina BooranaaOromiyaa
July 7, 2022 sa;aa 6:45 am Update tahe